Iziqhingi ezinhle kakhulu zasePortugal | Izindaba Zokuhamba
Iziqhingi ezinhle kakhulu zasePortugal
UMariela Carril | | Iziqhingi, Portugal
Ngaphandle kokungabaza Portugal Ingenye yezindawo zasehlobo ezithandwa kakhulu kulabo abahlala ezingxenyeni ezinamakhaza kakhulu eYurophu. Kodwa ngale kobuhle bayo bezwekazi nolwandle lwayo lwasezulwini, izwe lineziqhingi ezinhle, ezihle ngasinye ngendlela yaso.
Okuhle ngalezi ziqhingi zasePortugal ukuthi isimo sezulu sishisa unyaka wonke, ngakho-ke ungahlela ukuvakasha ngendlela oyithandayo. Namuhla-ke iziqhingi ezinhle kakhulu zasePortuguese, lezo ongeke uziphuthe ehlobo lakho.
IPortugal inezidlanzana zeziqhingi ezingamapharadesi amancane lapho izulu lifudumele unyaka wonke. Namuhla sizokhuluma ngeSao Miguel Island, Cape Verde, Armona Island, Madeira, Flores, Terceira, Pico, Porto Santo, Da Tavira Island kanye neFaial Island.
La Isiqhingi saseSao Miguel Kuyisiqhingi esihle ukuhlola nokuncoma. Kuyingxenye yeqembu le- Iziqhingi zase-Azores futhi yiyona enkulu kunazo zonke eqenjini. Ineziningi i-volderic calderas futhi ngokunembile ngenxa yemvelaphi yayo kuneziphethu eziningi ezishisayo. Ngezikhathi ezithile zonyaka, ngaphezu kwalokho, kusuka ogwini ungabona imikhomo namahlengethwa futhi ungenza izinkambo ukuze wazise lezi zilwane ngokuseduze. Ungafika lapho ngendiza, kunesikhumulo sezindiza, futhi isikhathi esihle sokuhamba siphakathi kuka-Ephreli noNovemba.
Isiqhingi esihle sokuphumula yisona esidumile Cabo Verde, yize iseMozambique. Kuyisixuku se- iziqhingi zentaba-mlilo, eziyishumi sezizonke, nazo zonke izimo zezulu ezilinganisiwe. Okusho ukuthi, isimo sezulu somile ngokwedlulele, akuvamile kungashisi kakhulu futhi kungabandi kakhulu. Ngasikhathi sinye indawo yamasiko, ngenxa yendawo yayo yase-Afrika.
Kuyindawo enhle yezivakashi, edumile. Inhlokodolobha yayo iPraia, nokuyilapho kugxilwe khona amahhotela, izindawo zokudlela kanye nezinye. Isikhathi esihle sokuvakasha sisukela ngoNovemba kuya kuJuni.
La U-Ilha De Armona Ngeyesifunda sase-Algarve futhi iyindawo ekude nendawo yesivakashi. Kusondele ogwini azikho izimoto, bambalwa abantu futhi uphefumula ukuphumula okushisayo. Lesi siqhingi sinolwandle oluse-Atlantic nolunye eMfuleni iFormosa. Uma kunomsinga ophansi, ayakhululeka futhi ayamangalisa amachibi emvelo. Kunezindunduma ezigcwele izimbali, amanzi asobala nemigoqo eminingi nezindawo zokudlela ezitholakala eduze nendawo yokudlela lapho isikebhe sikuwisa khona.
Isikebhe sithatha imizuzu engama-20 kuphela. Ishiya u-Olhao no inkonzo yesikebhe iyaqhubeka, unyaka wonke, yize kuvame kakhulu ezinyangeni zasehlobo, ngoJulayi nango-Agasti. Ezinhlangothini zombili zomkhumbi kunebhishi iRía de Armona, elineBlue Flag. Ibhishi lase-Atlantic lingaphesheya kwesiqhingi, uhambo olungaphezu kwekhilomitha lapho ungabona khona izindlu zabadobi ezinhle. Uzobona futhi amakamu asesiqhingini kanye ne-ejensi yezokuvakasha lapho kuqashwa khona ukuvakasha.
Ukufika olwandle unqamula umzila wokhuni ondabula phezu kwendlela izindunduma eziphuzi, ezinamachashaza. Kukhona ibhuloho elisentshonalanga elikusa engxenyeni yesiqhingi lapho amagagasi enyuka futhi ehle khona futhi ubone ukufika nokuhamba kwezikebhe. Ibhishi lokugcina likhulu futhi ngenhlanhla kunendawo yokuphuzela olwandle eqasha izigaxa, izambulela futhi ithengise ukudla neziphuzo.
IMadeira ingesinye seziqhingi ezidume kakhulu ePortugal, eNyakatho ye-Atlantic. Izigidi zezivakashi ziyivakashela minyaka yonke futhi futhi inesimo sezulu esihle kakhulu. Hhayi kuphela amabhishi, uma kungenjalo amahlathi aluhlaza ezimema ukuhlola nemisebenzi efana ukugibela ihhashi, i-kayaking, igalofu, i-paragliding, ukudoba ...
Isiqhingi ngamakhilomitha angama-600 ogwini olusentshonalanga yeMorocco futhi ibanga elingacishe lifane nolwandle lwasePortugal. Qaphela, iMadeira ayisona isiqhingi esisodwa, kepha isiqhingi esineziqhingi ezine ezakha sonke. Yinguqulo yesiPutukezi yaseHawaii, enamabhishi, izintaba-mlilo, amachibi kanye namahlathi.
La Isiqhingi sasePico ise-Azores futhi idume nge- intabamlilo wegama elifanayo. Umcebo wayo nendawo ethandwa kakhulu izivakashi yi- IPonta do Pico, intaba ephakeme kunazo zonke ezweni. Vele, ukukhuphukela phezulu yilokho okungaphuthelwa muntu. Kepha ngaphesheya kwalokho iPico isiqhingi esiluhlaza okotshani, okumnandi ukukuhlola ... Futhi ingabe uPico ungumkhiqizi wewayini, bewazi? Izivini ziyiPIndawo Yamagugu Omhlaba ngokubaluleka kwamasiko emnothweni wamaPutukezi.
Ufika ePico emahoreni ayisithupha ngesikebhe noma ngendiza. Ukusuka eLisbon kungumqondo omuhle kakhulu kepha futhi ungaqala ukusuka eHorta. Phakathi kweziqhingi zasePortugal esizibuyekezayo, asikwazi ukukhohlwa I-Flores, isiqhingi se-photogenic kakhulu kukho konke. Kungaphakathi kwesikhulumi se-Azores, ngaphakathi kweqembu lasentshonalanga, futhi isikhathi esihle sokuyivakashela kusuka maphakathi no-Ephreli kuya maphakathi no-Okthoba. IFlores Island isimenyezelwe njengesiqiwi se- I-Biosphere yi-UNESCO e 2009.
Kuhle kakhulu ukuthi kunzima ukuthola indawo yokuhlala ezinyangeni zasehlobo ngakho-ke ungayi lapho bese unquma inhlanhla yakho. Uhlelo! Uzothanda isiqhingi: unga ukuhamba, ukuthola izimpophoma zalo ezinhle, ukukhuphuka, ukubhukuda, ukubuka imikhomo, i-kayaking ...
La U-Ilha da Tavira use-Atlantic futhi kuhle uhambo losuku. Inesimo sezulu esimnandi kakhulu futhi ngezinsuku ezifudumele simatasa kakhulu. Kumele kuthiwe inamamitha angamakhulu ambalwa ogwini lolwandle. Esiqhingini okulungiselelwe kakhulu ezokuvakasha ngakho-ke kunezindawo zokudlela, imigoqo, amathilomu nezinkampani zezokuvakasha ezihlela usuku nemisebenzi yalo. Kunjengoba igama lisho, eTavira, futhi kufinyelelwa kuso ngesikebhe, izikebhe nangamatekisi amanzi.
I-Tavira Ingamakhilomitha ayi-11 kuphela ubude kodwa amabhishi anesihlabathi namanzi awo aluhlaza okwesibhakabhaka ngeke bakudumaze. Ngaphezu kwalokho kunezinyoni eziningi namachibi futhi lapho, amahle ama-flamingo abomvana. Yeka umbukiso! Esinye isiqhingi esihle yi Isiqhingi saseTerceira, isiqhingi sesithathu ngobukhulu e-Azores, yize kungenjalo okuthuthukile kakhulu. Kepha hhe, ubuhle bayo bulele ngqo kulesi simo esicishe sibe yizintombi nasendaweni yokwamukela izihambi yabantu bayo.
E-Terceira kusekhona i- UCastelo de San Juan Bautista, inqaba eyake yalwa nabaseSpain, futhi futhi akekho noyedwa ongasuka lapha ngaphandle kokunambitha i- iwayini eliluhlaza, okukhethekile kwendawo. Kungcono ukusuka ngoMeyi kuya ku-Okthoba. Kepha uma ufuna amabhishi lapho uya khona Isiqhingi sasePorto Santo, enyakatho yeMadeira. Akungabazeki ukuthi nazi ezinye ze- amabhishi amahle kakhulu ePortugal, anesihlabathi esihle esimhlophe namanzi aluhlaza.
Kepha iPorto Santo nayo inomlando, i- Indlu kaChristopher Columbus, isibonelo, isonto lekhulu le-XNUMX, izakhiwo zangekhulu le-XNUMX… Into enhle ngePorto Santo ukuthi ingavakashelwa futhi unyaka wonke. Isiqhingi esincane, kodwa sihle kakhulu. Amabhishi ayi-100%, ukudilika nokushayela ngesikebhe ngesikebhe. Sisondela ekugcineni kohlu: Isiqhingi saseFaial yiBlue Island, enkabeni ye-Azores nge amabhishi amhlophe, idolobha laseHorta nezintaba-mlilo.
Ukuhlola ICaldeira yenza Faial Kuyinto a kumele izivakashi. Zama okufanayo ukudla kwasendaweni. Uzohamba nini? Phakathi kukaMeyi no-Okthoba.
Njengoba ukwazi ukubona, inyanga ngayinye yonyaka kukhona isiqhingi sasePutukezi ongasivakashela, konke kuya ngohlobo lwemisebenzi yamathafa oyifunayo kepha kusobala ukuthi, sekugcwele ulwandle, ilanga nesihlabathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Portugal » Iziqhingi ezinhle kakhulu zasePortugal
Amabhishi amahle aseHuelva